Poetawebs mitafa amin'i Tahirintsoa
TAPATAPAK'AHITRA NIFANAOVAN'NY POETAWEBS TAMIN'I TAHIRINTSOA
MOMBA NY "RAHAMPITSO RAHA TIANAO... AMBOARA TONONKALO AN-KIRA"
Asa raha tadidinao mpiseran'ny poetawebs fa i Tahirintsoa, Filohan'ny Faribolana Sandratra Sampana Antananarivo, no anisan'ny vahinin'ny Poetawebs voalohany tamin'ny tapatapak'ahitra. Raha ny marimarina kokoa dia tamiin'ny 13 Aogositra 2009 izy no nivahiny teto amintsika. Telo taona mahery kely taty aoriana dia atolotra anao indray ny tafatafan'izy sy Toetra RAJA momba ny fandraisany anjara tamin'ny hetsika lehibe voalaza etsy ambony. Tena tafatafan'ny mpirahalahy ela tsy nihaona tokoa ka anasana anao hiroboka ao amin'ny votoatiny.
Manahoana i Tahirintsoa, Toetra Raja ihany ity. Mahaliana ny Poetawebs ny hevitrao momba ny hetsika nokarakarain'ny OMDA iny, voarainao ve ilay mailaka?
Manahoana Toetra Raja, vao eo mihitsy aho no nahavaky ny soratrao ao amin'ny mailaka fa tsy nanokatra an'io adiresy io somary elaela. Vao saika hamaly kinanjo mifanojo eto isika. Misaotra amin'ny resaka ao amin'ny mailaka. Ny OMDA tokoa, amin'ny maha rafitra iray azy ao anatin'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Vakoka, no nikarakara ny hetsika. Ny mpiantsa tao aminay no nantsoiny niampy olona 3 hafa. Fa ny tsy azo lavina dia hery lehibe nahatontosa iny hetsika iny izahay hatrany am-boalohany: fiketrehana, fanomanana sns...
Iza ireo olona 3 hafa?
Lolona Randriamampianina, Clara (ilay feo mangan'ny serasera iny), Andry Andriamanantena (zanaky Rado, Georges Andriamanantena).
Poeta koa ve i Clara sy Andry Andriamanantena?
Samy tsy poeta izy ireo fa oloben'ny tontolon'ny fiantsana.
Nisy mpihira niantsa tononkalo ve, na poeta nihira, na hira niarahana?
Tsy nisy, fa nisy kosa tononkira nantsaina, toy ilay "tontolo iainana" an'i Raoul (Mahaleo).
Inona no lohahevitra novoizina azo tarafina tamin'ireo safidin'ny tononkalo sy hira?
Ny tanjona tiana ho notratrarina aloha dia ny hanomezana toerana milahatra amin'ny zavakanto hafa, toy ny hira, ny haisoratra miaraka amin'ny antsa sy ny mpiantsa. Tsy dia nisy loatra, araka izany, ny lohahevitra fa ny fomba natao dia ny nijerena hira anankiray (ohatra: "Nahoana kay" an'i Dama) mifandraika amin'ny tononkalo miresaka zavatra mitovy aminy. Dia niainga tamin'izany no nipoiran'ireo tononkalo: an'ireo zokiny, Dox, elie rajaonarison, Rodlish, Rado sy ny taty aoriana Solofo José, Nofy, Tahirintsoa, Avelo Nidor sns.
Nandray anjara tao ny mpihira avy any amin'ny faritany. Nanana ny toerany tao koa ve ny tononkalo amin'ny fitenim-paritra?
Ny mpihira heverina hoe avy any amin'ny faritra dia: Mike & Davis, Jean Rigo, Théo Rakotovao (Mikea), Babaïque. Ary nisy tononkalo tamin'ny tenim-paritra Betsimisaraka tokoa. Nohafarana manokana avy tany Vatomandry i Radialf izay poeta manoratra amin'ny fiteny Betsimisaraka. Izy no miantsa azy tsara amin'izany fiteny izany (izy no tena nankasitrahan'ny betsaka tao).
Anisan'ny tononkalony: Folera, Zaza igny, Delira..., Zanaka Tantsaha.
Radialf ve Sandratra koa?
Eny, Faribolana Sandratra sampana Vatomandry izy.
Nisy fitsipika narahana ve tamin'ny fandaharana? Tononkalo firy isaky ny mpiantsa? Tononkalo firy isaky ny poeta tranainy? Tononkalo firy isaky ny poeta zandriny? Hira firy isaky ny mpihira?
Tsy dia nisy loatra. Teo amin'ny antsa: nisy 2 fotsiny nisy nanao 5. Dia tsy natao fepetra koa ny isa teo amin'ny poeta zokiny/zandriny fa ny tsapa dia nifanahantsahana ny
isa (tsy niniana akory). Teo amin'ny hira indray dia 2 avy fa ry Mahaleo no nanatombo kely.
Misaotra indrindra Tahirintsoa nanaiky nizara ho an'ny Mpiseran'ny Poetawebs ny zavatra niainana tamin'iny andro manokana niarahan'ny Poeta sy ny Mpihira iny, izay ampatsiahivina fa nokarakarain'ny OMDA tao amin'ny Carlton ny 04 novambra 2012.
Tsy misy isaorana fa izay azoko natao no nataoko dia mirary soa indrindra.
Nanomana ny tapatapak'ahitra